Taksi Ganacsi iyo Gawaaridii Adeegga oo la Diiday | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi Bari44 MalatyaTagsi Ganacsi iyo Gawaari Adeeg
19 / 03 / 2020 44 Malatya, Gobolka Waqooyi Bari, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
taxi ganacsi iyo gaadiid adeeg ayaa la jaray
Dawlada Hoose ee Magaalaweynta Malatya waxay sii wadaysaa kordhinta talaabooyinka lagama maarmaanka ah ee looga hortagayo cudurka 'corona virus', kaas oo wax ku ool ah adduunka oo dhanna ku faafay waddankeenna.
Xaaladda guud, jiritaanka taksiga iyo gawaarida adeegga ee ka shaqeeya magaaladeena waxaa loo fidiyaa dadkeenna si ay ugu safraan si nabadgelyo leh oo caafimaad leh.
Kala-baxa taksiga iyo gawaarida adeegga ee Malatya Metropolitan Waaxda Ilaalinta Deegaanka iyo Xakamaynta, Kooxaha Maareynta Kalaca.
Keskin: Waxaan u baahan nahay inaan fiiro gaarno nadaafadda oo aan si dhab ah u qaadno
Isagoo bayaan siinaya ka dib markii jeermis ku faafa aagga ku xigaa Dawladda Hoose ee Magaalada, Madaxweynaha Malatya Union of Tradesmen iyo Craftsmen (MESOB) Madaxweynaha Şevket Keskin ayaa yidhi, “Waad ogtahay, inuu jiro fayras adduunka gilgiley. Si uu cudurkani dhif uga noqdo dalkeenna, waxaan la hadalnay Duqa Degmadda Magaalada Metropolitan iyo masuuliyiinta gaar ahaan xagga nadaafadda. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo Duqa Magaalada ee Magaala-weynta, oo aan u diiday kaalmadooda nadiifinta nadaafadda gawaaridayada, anigoo ku hadlaya magaca dhammaan ganacsatada.
Dhamaan muwaadiniinteena waxay u baahan yihiin inay si taxaddar leh uga taxadaraan nadaafadan shaqsiyaadka ayna u qaataan si dhab ah. Waa inaan ka gudubnaa fowdada ka jirta dalkeenna, waxaan rajeynayaa in dowladdayada iyo Madaxweynahayagu ay ku xirnaan doonaan waddankeenna iyagoo uga mahadcelinaya tillaabooyinka waaweyn ee ay qaadeen. Waan u mahadcelinayaa qof walba.
Intaa kadib, asxaabteena ayaa uga taga daaqadaha gawaarida waxyar oo furan. Feex gawaaridaada. Hayso cologne iyo walxaha nadaafadda. Hubso inaad jeermis ku sameyso meelaha gacmahaaga ama muwaadiniinta aad iibsaneyso adigoo raacaya rakaabka uu taabtay darawalka gaariga. Aynu fiiro gaar ah u yeelano nadaafadda marka aan shaqada imaado iyo guriga ku soo noqdo fiidkii. Waxaan rajeynayaa inaan si wadajir ah uga gudubno howshan. ”
Duqa magaalada Gürkan: Waa inaan qaadnaa talaabooyinka lagama maarmaanka ah shaqsi ahaan iyo bulsho ahaanba
Duqa Magaaladda Metro Selahattin Gürkan ayaa yidhi, Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Guddoomiyahayada Rugta Ganacsiga iyo Chauffeurs. Haddii ay tahay ganacsatada tagaasidayada tagaasida, ganacsatada adeega gawaarida ama dukaanleyda baska, waxaan ku jirnaa goob shaqo oo caan ah.
Annaga oo ah bulshada iyo dawladda, waxaa na saaran masuuliyad ah inaan qaadno taxaddarrada lagama maarmaanka ah meesha ay fayraska corona ku duugayso adduunka, oo uu uga gudbo iyada oo aan la abuurin wax dhibaato ah waddankeenna. Dabcan, waxaan cadeyneynaa in tilaabooyinka aan qaadeyn inaysan wax qas ah u geysan muwaadiniinteena aalad walba.
Waxaan u baahan nahay inaan ogaano inay muhiim tahay in la nadiifiyo gaadiidka dadweynaha, tagaasida iyo adeegyada nadaafadda.
Marka laga hadlayo tusaale ahaan, waaxda Ilaalinta Deegaanka iyo Waaxda Ilaalinta Deegaanka ee Dawlada Hoose; Daraasadaha waxaa loo fuliyaa ka-hortaga iyo jeermiska darawallada taksi, basaska, adeegyada iyo gaadiidka dadweynaha.
Bulsho ahaan, waxaan u baahan nahay inaan xoojinno sida ay muhiimka u tahay feyraska corona-ku marka loo eego tallaabooyinka la qaadayo shaqsi ahaan iyo bulsho ahaanba. Waqtiga soo socda, dareenkeena iyo dhaqamadeena, gaar ahaan halka gacanta lagu ruxayo, barta nadiifinta iyo nadaafadda, waxay sidoo kale iftiimin doontaa bulshadeena iyo caafimaadkeena.
Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo Waaxda Ilaalinta Deegaanka iyo Xakameynta, oo qabata shaqadan, iyo madaxweynaha qiimaha weyn ee Şevket Keskin iyo walaalaheena ganacsatada ah.
Rabitaankeenna iyo hamigeenna waa in; Dalkeenu waa inuu ka hortago infekshinka iyo xaaladaha kale ee daran ee uu keeno fayraska corona. Waxaan dhahay dib ugu noqo bulshadeena. Waxaan rajeynayaa in tirada bukaannada aysan ka badnaan doonin tirooyinka ay shaacisay Wasaaradda Caafimaadka. ”
1 Qof ayaa ku dhaawacmay tareenka ganacsiga Taksiyada ee Eskisehir
IDO waxay kor u qaadaysaa gawaarida bilaashka ah ee Marmar